Rebuilderd: Nidaamka Xaqiijinta Xirmooyinka Binary ee Madaxa-bannaan ee Arch Linux | Laga soo bilaabo Linux
Rebuilderd - Nidaam Hubinta Xidhmada Binary ee Madaxbanaan ee Arch Linux
Dhawaan bilawga "Rebuilderd" ayaa lagu dhawaaqay kaas oo loo taagay sida nidaam xaqiijin madax bannaan oo loogu talagalay xirmooyinka binary in waxay u oggolaaneysaa abaabulka xaqiijinta xirmooyinka qaybinta iyada oo la hirgelinayo nidaam dhisme socda oo isbarbardhigaya xirmooyinka la soo dejin karo iyo xirmooyinka la helay iyada oo ay sabab u tahay dib u dhiska nidaamka maxalliga ah.
Si kale haddii loo dhigo, nidaamkani wuxuu bixiyaa adeeg kormeeraya heerka tusmada xirmada oo si toos ah u bilaw dib u dhiska xirmooyinka cusub ee deegaanka tixraaca, oo gobolkiisu la jaanqaadayo deegaanka Xirmada aasaasiga ah ee dhismaha 'Arch Linux'.
Markaad uruurineyso markale, nuunisyada sida iswaafajinta saxda ah ee ku-tiirsanaanta waa la tixgeliyaa, isticmaalka dhismayaasha aan isbedelka iyo noocyada qalabka dhismaha, isku midka ah xulashooyinka iyo dejinta dejinta, iyo ilaalinta amarka isku dhafka faylka (iyadoo la adeegsanayo habab isku mid ah).
Dejinta nidaamka dhismuhu waxay ka reebaysaa isku-duwaha inuu ku daro macluumaad guud oo aan is-waafaqsanayn sida qiimayaasha kala-sooc la'aanta ah, iskuxirayaasha dariiqyada faylalka, iyo xogta ku saabsan isu-geynta taariikhda iyo waqtiga
1 Ku saabsan Rebuilderd
2 Rakibaadda iyo fulinta
Ku saabsan Rebuilderd
Xilligan kaliya taageerada tijaabada ah ayaa loo heli karaa hubinta xirmooyinka Arch Linux la dhisay, laakiin wuxuu qorsheynayaa inuu dhowaan ku daro taageerada Debian.
Hadda, dhismayaasha soo noqnoqda waxaa la siiyaa 84.1% xirmooyinka keydka weyn ee Arch Linux, wuxuu ka helaa 83.8% keydka dheeriga ah iyo 76.9% keydka bulshada. Isbarbardhig ahaan, Debian 10 tiradaani waa 94,1%.
Halka, dhismuhu yahay qayb muhiim ah oo amniga ka mid ah sii isticmaale kasta fursad uu ku hubiyo in baakadaha-by-byte ee ay bixiso xirmada qeybinta ay la mid yihiin kuwa shaqsiyan laga soo ururiyey ilaha laga soo xigtay.
Awood la'aan in lagu xaqiijiyo aqoonsiga binaryka la soo ururiyey, isticmaalaha wuxuu si indho la'aan ah ugu kalsoonaan karaa qof kale dhismihiisa dhisme, isagoo wax u dhimaya isku-duwaha ama qalabka wax-soo-ururinta halkaasoo ay u horseedi karto beddel sumadeeye qarsoon.
Rakibaadda iyo fulinta
Xaaladda ugu fudud, si dib loogu dhiso dib-u-dhis ayaa ku filan in lagu rakibo xirmada dib-u-dhiska ee keydka caadiga ah, soo dejiso furaha GPG si loo xaqiijiyo deegaanka loona kiciyo adeegga u dhigma adeegga. Waa suurtagal in la hirgeliyo shabakad dhowr jeer oo dib loo dhisay.
Si loo rakibo, waa inaanu furnaa terminal oo ku dhex qornaa amarka soo socda:
Tan ayaa sameysay, hadda waa inaan soo dejino furaha GPG, tan iyo Rebuilderd waa inuu xaqiijiyaa muuqaalka bootka Arch Linux, tanna marka loo eego terminalka waa inaan qornaa amarka soo socda:
Tan ka dib waa inaan ku darno isticmaaleheena kooxda Rebuilderd, tan iyo waxaa laga yaabaa inaan helno qalad:
Hadda waxaan si fudud ku qasbanaaneynaa inaan xaqiijino in Rebuilderd uu horay usocdo oo ku saabsan nidaamka, tan, waxaan kaliya ku qornaa:
Iyo haddii aan rabno inaan ku wadaagno natiijooyinka shabakadda, waa inaan qornaa:
systemctl awood - hadda dib-u-dhise dib-u-dhise-shaqaale @ alpha
Hadda waxaa muhiim ah in lagu xisaabtamo in Rebuilderd uusan ficil ku soo deyn doonin illaa si cad loo qeexayo halka ay ku xiran tahay xirmooyinka nidaamka, tan waa inaan wax ka bedelnaa faylka /etc/rebuilderd-sync.conf halkaasoo qaababka iswaafajinta loo qaabeynayo. iyo magacyada astaanta u ah waa kuwo gaar ah:
Tusaalaha tan waa kuwan soo socda:
Marka feylka wax laga beddelay, waxaad si fudud ugu qasbaysaa inaad saacadda si toos ah u waafajiso astaanta:
Finalmente haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato Rebuilderd, waa inay ogaadaan inay ku qoran tahay Rust oo lagu qaybiyay liisanka GPLv3 waadna hubin kartaa dhammaan faahfaahintiisa iyo lambarka Xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Rebuilderd - Nidaam Hubinta Xidhmada Binary ee Madaxbanaan ee Arch Linux
Docker: Sidee loo rakibaa nooca ugu dambeeya ee xasilloon DEBIAN 10?
In ka badan 700 xirmooyin xun xun oo loo adeegsaday macdanta ayaa laga helay RubyGems